Semalt Expert: Ahoana ny fahombiazan'ny fitantanana ny làlana?
Ny marketing ara-nomerika dia ilaina amin'ny orinasa miaraka amin'ny sehatra iray amin'ny aterineto. Amin'ny marika nomerika, tranonkala iray manokana no hampitombo ny vondron'ny mpanjifa sy ny tombom-barotra. Teknolojia maromaro dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fahitana marika ho an'ny mpivarotra an-tserasera - istanbul net kurumsal. Ny sasany amin'ireo teknika ireo dia ahafahana manatsara ny safidy (SEO), ny fampielezan-kevitra amin'ny media sosialy (SMM) ary ny marketing-vontoaty. Ireo fomba ireo dia mifototra amin'ny tetik'ady SEO toy ny fikarohana fikarohana, fanamarihana, famerenam-bidy ary koa fampiasana fanentanana adin'ny PTC.
Ho an'ny trangan'ny varotra ao amin'ny tranonkala, misy fomba mahomby ahafahan'ny olona mahazo votoaty ho an'ny tranonkala. Mpandraharaha maro no miatrika ny olana amin'ny fisafidianana ny votoaty ampiasaina. Ao anatin'io vanim-potoana nomerika io, ny aterineto dia manana endri-dizitaly rehetra. Amin'izany, azonao atao ny manisy lahatsoratra bilaogy tsara ho an'ny votoatiny. Ny sasany dia mety mampiasa ny votoaty voalohany ary ny hafa kosa miankina amin'ny votoaty faharoa. Amin'ny ankapobeny, Andrew Dyhan, Semalt manam-pahaizana Customer Success dia mihevitra fa tsy maintsy misy fahasamihafana eo amin'ny votoaty voalohany sy faharoa mba hahombiazan'ny fampielezan-kevitra.
Ny fahasamihafana eo amin'ny fikarohana momba ny votoaty voalohany sy faharoa
Manazava ireo mpandalina fa ny ankamaroan'ny mpamaky tranonkala iray dia mametraka URL miaraka amin'ny tanjona ao an-tsainao. Ny ankamaroan'ny tranokala findainao dia tsy miraharaha ny vaovao. Ny tanjona mahazatra amin'ny fitsidihana tranonkala iray dia mahazo vaovao na manao antso ho an'ny asa atao..Na izany aza, mety ho fantatry ny olona fikarohana lalina sasany ny fahasamihafana, izay mety hisy fiantraikany amin'ny fanapahan-keviny hanova ny tranokalanao.
Ara-pitsipi-pitenenana, avy amin'ny scratch izany. Mety misy ny heviny manokana, ny tatitra momba ny laboratoara na ny karazana tatitra hafa. Ny tsipika momba ny loharanom-baomiera dia mametraka ny tompon'ny blôgy / tranonkala ho mpanoratra, ary ny fangatahan'ny manam-pahaizana dia afaka manonona ny tranokala sy ny lohahevitra. Raha ny marina dia azo atao ny mampiasa indray ny angon-drakitra voalohany na manamboatra ny votoaty hampiasana azy amin'ny tranokala hafa ho loharanom-baovao fanampiny. Ny angona ao amin'ny Kilonga dia azo antoka, saingy misy fangatahana sasantsasany mety hangatahana referans. Ireo loharanom-baovao faharoa dia tsara amin'ny fitanisana mpanoratra hafa.
Ireo loharanom-pahalalana faharoa dia manana lanja bebe kokoa noho ny loharanom-baovao fototra. Izy ireo dia tafiditra amin'ny famintinana boky misaina maromaro ary koa fianarana malaza. Ohatra iray amin'ny fidirana antontan-kevitra dia mety tafiditra ao anatin'io fehezanteny io toy ny "Araka ny fikarohana nataon'ny Forrester na ny Biraon'ny Sivana." Ny karazana fampahalalana toy izany dia mampitombo ny fahamendrehan'ny fampahalalana nataonao ho an'ny mpamaky iray mba hizaha ny loharanao. Ankoatra izany, ny fitanisana loharanom-pahefana faharoa dia mampitombo ny fahefan'ny pejy misy anao. Ity fepetra ity dia manampy ny fitadiavana ny fitaovam-piadiana alohan'ny loharano maro hafa.
Ny raharaham-barotra an-tserasera rehetra dia mila fahitana anaty aterineto sahaza mba hahazoana mpanjifa lehibe. Amin'izao lafiny izao, ny marketing-vontoatin-tserasera dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiantohana ny fahombiazan'ity raharaha ity. Ny orinasa dia mampiasa ny SEO maso iraisam-pirenena izay manao ny sasany amin'ireo asa ireo. Na izany aza, mety mila mianatra ianao hoe ahoana no fomba fiasa ara-barotra sy ny fomba fampiasana tsirairay. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny dokam-barotra ao amin'ny votoaty dia mety ahitana karazana data roa: ny angon-drakitra voalohany sy ny angona faharoa. Ity toro-lalana ity dia afaka mampianatra anao ny fahasamihafana sy ny fomba ampiasaina amin'ny sehatra manokana. Afaka mamorona ny angon-drakitrao ianao ary mamorona tranonkala ahitàna loharano maro.